Palestina · Mey, 2019 · Global Voices teny Malagasy
Palestina · Mey, 2019
Tantara mikasika ny Palestina tamin'ny Mey, 2019
Afovoany – Atsinanana : Isiraely sy ny Fampiasana Fôsfôra Fotsy ao Gaza
Ejipta24 Mey 2019
Nihorohoro ireo mpijery fahitalavitra manerantany nahta ireo sary mampihoronkoditry ny niharan-doza tao Gaza - ny sasantsasany tamin'izy ireo dia nanjary ratsy endrika efa mila tsy ho fantatra intsony. Miantso an'i Isiraely ny ONG iraisam-pirenena mpiaro zon'olombelona Human Rights Watch, mba hamarana ny fampiasana tsy ara-dalàna fôsfôra fotsyamin'ny adiny amin'i Gazà.
Ejipte-Gaza : Rafah, lafy ejiptiàna
Ejipta23 Mey 2019
Mijere ao ivelany. MITSIKY AMINAO ny F-16. Mandihy ho anao ireo BALAFOMANGA. Mihira ho anao ZANNANA, satria samy nasaiko DAHOLO ry zareo mba hirary * TAONA VAOVAO IRAY SAMBATRA ho anao
AB14: “Tsy tokony hieritreritra isika fa hamaha izay olantsika rehetra ny teknolojia”
Ejipta12 Mey 2019
Nifantoka tamin'ny paikadin'ny fikarohana ny fiarovana amin'ny sivana sy ny fanaraha-maso ny fivoriana sy amin'ny fiarovana ny fifamatorana iombonana eo amin'ny toerana ahatsapana toa voasaratsaraka bebe kokoa hatrany isan'andro.
Syria: Mandefa ireo fanampiana any Gaza ny Vokovoko Mena (Volantsinana Mena)
Syria04 Mey 2019
Nitatitra momba ny ezaky ny vokovoko mena Syriana Arabo amin'ny fandefasana fanampiana any Gaza ny Syria News Wire androany. Nahomby tamin'ny fandefasana kamiao 11 ahitana fanafody sy sakafo milanja 230 taonina any Gaza ity vondrona mpanao asa soa ity, izay mpikambana ao amin'ny Komity Iraisam-pirenen'ny Vokovoko Mena.